Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment सिमा कब्जाको विरोधमा उर्लिए विद्यार्थीहरु; सरकारलाई यस्तो आग्रह ! - Pnpkhabar.com
पिएनपिखबर : भारतले नेपाली भूभागको अतिक्रमण गरेको विरोधमा प्रभात अंग्रेजी स्कूलले भक्तपुरमा र्याली आयोजना गरेको छ। उक्त सकुलका विद्यार्थीहरुले बुधबार ‘लिपुलेक हाम्रो हो’ ,’भारतको नक्सा खारेज गर’ ,’भारतीय सेना देश छोड’ भन्दै नारावाजी लगाएका हुन्।
उक्त स्कुलका एक शिक्षकले भारतद्वारा नेपालको सार्वभौमतामा आच पुराइरहेको बताएका छन्। भारतको नेपाली जग्गा अतिक्रमण गरेपछि भविष्यका कर्णाधारहरु आफ्नो पढाई छाडेर देशको लागि आवाज उठाएको उनको भनाई छ। बाँकी हेर्नुहोस भिडियोमा:
सरिता गिरीलाई बर्खास्त गरेपछि नेता रिजालद्वारा समाजवादी पार्टीलाई धन्यवाद
सुनचाँदीको मूल्य फेरी बढ्यो, आज कतिमा कारोबार हुँदैछ ?
हावाबाट कोरोना संक्रमण नसर्ने भन्न नसकिने डब्लुएचओको भनाइ, पुष्टि भए के हुन्छ ?
विभागद्वारा दुई औ’षधिमा रोक
प्रधानमन्त्री ओलीका पक्षमा इलाममा प्र’द’र्शन
ब’न्दूकसहित दुई प’क्राउ
काँग्रेस नेता महेन्द्र मल्ल पार्टीबाट निष्काशित